I-United Airlines inikeza amakhodi we-PayPal QR njengenketho entsha yokukhokha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-United Airlines inikeza amakhodi we-PayPal QR njengenketho entsha yokukhokha
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ubuchwepheshe • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
I-United Airlines iba ngumthwali womoya wokuqala ukwethula amakhodi we-PayPal QR njengenketho yokukhokha okukhanyayo - nge-Wi-Fi noma ngaphandle kwayo.
Umnikelo wakamuva wokukhokha ngaphandle kokuthinta uvumela amakhasimende ukuthi athenge ukudla okulula, iziphuzo, nokunye ukuthenga nge-inflight ngenkathi esebhodini ngokuskena nje ikhodi ye-QR.
Abagibeli be-United Airlines bangasebenzisa inketho yokukhokha ikhodi entsha ye-PayPal QR - nge-Wi-Fi noma ngaphandle kwayo.
Ukubambisana kuqala eChicago ngenyanga ezayo futhi kuzoqala uhlelo lonke ngaphambi kokuphela konyaka.
I-United ne-PayPal namuhla bamemezele indlela entsha yokwenza ukuthenga okungathinti lutho, ngisho nasezindaweni ezingenayo i-Wi-Fi. Kusukela ngenyanga ezayo, amakhasimende e-United ezindizeni ezikhethiwe angavele akhombise umuntu osebenza endizeni i-PayPal QR Code kuhlelo lokusebenza lwe-PayPal futhi ayisebenzisele ukuthenga ukudla okulula, iziphuzo nokunye ukuthenga nge-inflight ngenkathi ugibele.
I-United Iba Yindiza Yokuqala Yokwethula Amakhodi we-PayPal QR njengeNketho Yokukhokha Inflight
Lufthansa yinkampani yezindiza yokuqala ukunikela PayPal Amakhodi we-QR, futhi lobu budlelwano buyingxenye yokusebenzisa okulula ukusetshenziswa kwe-United, okuhola phambili embonini yamathuluzi wokukhokha angathintwa. I-United ibiyinkampani yezindiza yokuqala enikeza amakhasimende ezindlini zezomnotho ithuba loku-oda kusengaphambili iziphuzo neziphuzo ezivela kuhlelo lokusebenza lwendiza kanye nakuwebhusayithi, futhi kunikeza namakhasimende amandla okugcina kalula imininingwane yokukhokha esikhwameni sedijithali.
PayPal Amakhodi we-QR angasetshenziswa ezindizeni ezikhethiwe ezisuka eChicago O 'Hare International Airport ngoNovemba nangaphambi kokuphela konyaka, zizodlulela kuzo zonke izindiza kuyo yonke inethiwekhi lapho kutholakala khona inkokhelo yokuxhumana.
"Umnikelo wethu wokukhokha ongathintwa wakhelwa ekwenzeni lula nokuzikhethela futhi kungenye indlela esenza ngcono isipiliyoni jikelele se-flying United," kusho uToby Enqvist, isikhulu samakhasimende Lufthansa. “AbakwaPayPal basebenzisana kakhulu futhi lobu buchwepheshe bunikeza amakhasimende ethu enye indlela elula yokuthenga, noma bengekho ku-inthanethi. Silindele ukwethula izinketho ezintsha nezintsha zamakhasimende ethu ngokuzayo ngokubambisana kwethu ne-PayPal. ”
Uma ungakenzi kanjalo, landa uhlelo lokusebenza lwe-PayPal bese usetha indlela oyikhokhela yokukhokha yezinkokhelo zekhodi ye-QR, ngaphambi kokushiya isango.
Ukuze wenze ukuthenga okuncane, Chofoza inkinobho ethi 'Khokha ngamakhodi we-QR'.
Bese uchofoza inkinobho ethi 'In-flight Purchase'.
Khombisa ikhodi ye-QR kwisisebenzi sendiza ukuze siskene.
Bheka irisidi yokuqinisekisa nge-imeyili lapho ufika.
"Sijabule ukusebenzisana ne-United ukwethula ukusebenza kwethu okusha kwe-QR code okungaxhunyiwe ku-inthanethi, singeza izindlela eziningi zokuthi amakhasimende ahlole nge-PayPal ezindaweni eziningi, ikakhulukazi ezindaweni ezingaxhunyiwe ku-inthanethi noma eziphansi," kusho uFrank Keller, iSekela likaMongameli oMkhulu we Izixazululo ze-Enterprise Segment ne-Digital Commerce kwa-PayPal. "Ukuletha ukukhanya kwamakhodi we-PayPal QR kuqinisa ukuzibophezela kwethu ekunikezeni amakhasimende ithuba lokukhetha futhi kunikezela ngezinga elisha lokungathintwa kwabathengi lapho bethenga phakathi kwezindiza, ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-PayPal abaziyo nabathembayo."
I-Malta Tourism Authority eNyakatho Melika Manje Iwina Oku-3 Okungcono Kakhulu...
Usongo Lwezempilo Olukhulu kune-COVID-19 Esafufusa?
Izindawo ezihamba phambili ezingu-10 zama-freelancer emhlabeni
Okthoba 27, 2021 ku-07: 27
Silindele ukwethula izinketho eziningi ezintsha nezintsha kumakhasimende ethu. Inkampani yezindiza futhi yaba ngeyokuqala ukunikeza abagibeli bezomnotho inketho yoku-oda kusengaphambili ukudla okulula neziphuzo ngohlelo lokusebenza lwe-United newebhusayithi.